जनताको घरदैलोमा संघीय सांसद ध्रुव शाही - Arthapage
जनताको घरदैलोमा संघीय सांसद ध्रुव शाही
प्रकाशित मितिः ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:५३ August 25, 2020
गुर्भाकोट(सुर्खेत) ९ भदौ : सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद ध्रुव कुमार शाही निर्वाचन क्षेत्र गएपछि स्थानीयको घरदैलोमा पुगेका छन् ।
संसद चल्दा काठमाण्डौंमा हुनुपर्ने बाध्यताका कारण जोकोही सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतासंग भेट्न पाइरहेका हुँदैनन् । तर संसद स्थगित भएपछि भने शाही निरन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्छन्, विकास निर्माणका निरीक्षणदेखि स्थानीयको पिरमर्का बुझ्छन् ।
यतिबेला गुर्भाकोटका पहाड छिचोल्दै जनता भेटिरहेका सांसद शाही भन्छन्–‘जनतासंग टाडा रहँनै सकिदैन । संसद सकिना साथ कतिबेला गाउँ पुगौ भइरहन्छन् । जनतासंग भेट्दा बेग्लै महसुस हुन्छ । उनीहरुका पिरमर्का बुझ्ने अवसर मिल्छ ।’
गृहजिल्ला आए लगत्तै शाहीले चालु आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १५ सय २० वटा सुरक्षित आवास निर्माण सम्बन्धी निर्णय गरे । उनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भवन निर्माण सम्बन्धी निर्णय गर्यो ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि पहिलो सशोधन २०७७ अनुरुप सुरक्षित र वतावरण मैत्री आवासको लागि गरिवीको रेखामुनी रहेका ,प्रकोपका कारण घर बिहिन भएका र खर तथा परालको छाना भएका घरधुरिलाई जस्ताको छानामा ल्याउने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ ।
सोही नीति अनुसार सांसद शाहीको अध्यक्षतामा वसेको सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको वैठकले सिम्ता २ सय ३०,गुर्भाकोटमा ३ सय २०, भेरिगगामा २ सय ५०,चिंगाड २ सय, लेकवेशीमा २ सय ५० , वीरेन्द्रनगर ६३ , वाढीपिडित २ सय ७ गरि टीनको छाना १३ सय १३ र वाढी पीडित २ सय ७ गरि १५ सय २० घरधुरि सुरक्षित आवास निर्माण गरिने निर्णय गरेको हो ।
सांसद शाहीले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । उनले सरकारको लक्ष्य कार्यान्वयनको लागि सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यो निर्णय गरे लगत्तै शाही पार्टी कार्यक्रम र बिभिन्न योजनाको अनुगमनका लागि निर्वाचन क्षेत्र आए । सांसद विकास कोषदेखि अन्य विकासका योजना कसरी चलेका छन् ? स्थानीयका समस्या के छन् ? उनले सोधखोज गरेका छन् ।
शाही भन्छन्–‘क्षेत्र नं. १ को आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा आएका योजना परिपक्क तरिकारले सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा मैले निर्देशन दिएको छ । सरकारका कार्यक्रम लक्षित बर्गसम्म पुगे नपुगेको पनि हेरिरहेको छु ।’
स्थानीयले गरेका गुनासाका सुनेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने योजना बनाउन सजिलो भएको शाही बताउँछन् । नेकपा सुर्खेतका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद शाही पार्टी गतिविधिलाई पनि सक्रिय बनाउन उत्तिकै लागेका छन् ।
प्रकाशित मितिः ९ भाद्र २०७७, मंगलवार ११:५३ |
Prevवाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जको सेवा सुचारु
Nextराजनीतिक नियुक्तीमा कहिल्यै नछुट्ने उपेन्द्र कोइराला वाणिज्य बैंकको सन्चालक सदस्य बने, अब अध्यक्ष बन्दै